पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री साहिद खकान अब्बासी दुईदिने नेपाल भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन् । पाकिस्तानी विदेश कार्यालयको आधिकारिक वक्तव्यअनुसार यो भ्रमण क्षेत्रीय राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध बनाइराख्ने ‘तदारुकता तथा सक्रिय प्रयास’ हो ।
डा. युवराज संग्रौला तीन चरणको निर्वाचनपछि गठन भएका प्रदेश सरकारहरू कामकारबाहीबारे अन्योलमा छन्। उनीहरूका मुकाम अस्थायी छन्, कर्मचारी अनिश्चित। उनीहरूका आफ्ना कानुन बनेका छैनन्। उनीहरूले गर्ने कामको खाका तयार छैन।
युवा नेताहरूले देउवाको सत्तालाई चुनौती नदिएका मात्र होइनन्, बागडोर छाड्न देउवासामु अनुरोध पनि गर्न सकेका छैनन्, बरु याचना मात्र गरिरहेका छन् । उनीहरूको पहल सार्वजनिक खपतका लागि हो भने, त्यसले
प्रेरक प्रसंगः गुरु नानकको आशीर्वाद
गुरु नानक विभिन्न गाउँ गाउँको भ्रमण गरिरहन्थे । एकपटक उनी आफ्ना शिष्यसँग एउटा गाउँमा पुग । त्यहाँका मानिस धेरै उदार र सज्जन थिए । उनले गुरु नानकको खुव सेवा गरे
संभवत नेपाली काँग्रेस जीवनकै सबैभन्दा कठिन मोडमा छ अहिले । वाम गठबन्धन विरुद्ध चुनावमा कमजोर देखिएको काँग्रेस पार्टीभित्र पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुदैछ । केही नेता तथा कार्यकर्ताहरु बोल्न त
बेजोड कविता : मध्यरातमा उडेको जहाज
रुपेश श्रेष्ठ मध्यरातमा उड्यो विशाल यात्राको गर्जनसहित एउटा निर्जीव हवाइजहाज । पखेटा फिंजाएर जब उड्यो जहाज जहाजसँगै उडे केही थान सपना जहाजसँगै उडे केही थान भविष्य भेट्ला जहाजले कतै न
एनअारएन कार्डकाे अावश्यकता किन?
अनिल पाण्डे /‘देश छोडेर विदेश जाने, उतैको नागरिक पनि बन्ने, अनि मुलुकप्रति चिन्ता देखाउनेहरुप्रति मेरो आपत्ति छ’– कतिले यसो भनेको यस लेखकले पनि पढेको वा सुनेको छ । के तपाईं यस
इटहरी, २ फागुन (रासस) – भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले नेपालको ९६ प्रतिशत नागरिकको संस्कार संस्कृति र सम्पत्तीसम्बन्धी सोझो सम्बन्ध रहेको भूमिप्रतिको प्रशासन चुस्त, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन जरुरी